Dagaalka Itoobiya ka qarxay Saameyn maku yeelan karaan Wadamada Geeska Afrika ? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dagaalka Itoobiya ka qarxay Saameyn maku yeelan karaan Wadamada Geeska Afrika ?
Dagaalka Itoobiya ka qarxay Saameyn maku yeelan karaan Wadamada Geeska Afrika ?
Gobolka Geeska Africa waa mid ay
daashadeen colaado iyo dagaalo ilaa taariikhda inta la garanayoba , dagaaladaasi oo ahaa qaar diimeed , qaar qoomiyado , qaar dhul iyo waliba qaar nidaamyadii dawladeed ee ka jiray dalalka gobolka guud ahaan qaarkood lagaga soo horjeeday kuwaasi oo sababay in uu Geeska Africa noqdo gobol ka dib dhacsan gobolada kale ee Africa .
Gobolkani waxa uu ka mid yahay gobolada ay dadka ugu badani ka haajiraan ama ka tahriibaan iyaga oo raadinaya nolol iyo in ay wax u kordhaan oo ay helaan aqoon , shaqooyin , iyo mustaqbal wanaagsan , dalka ugu badan ee dadku haajiraan waa dalka ugu dadka badan ee Ethiopia.
Haddaba gobolkani maadaama uu yahay gobol ka mid ah gobolada aduunka ugu khayraadka iyo dhaqaalaha badan hadii tacab la galiyo isla markaana loo helo dadkiisa aragti ku jiheysa in ay wado cusub helaan oo abuurta midnimada iyo iskaashiga qoomiyadaha iyo qabiilooyinka kuwada nool gobolkani, waxa la gaadhi lahaa horumar weyn iyo in guud ahaan gobolkani noqdo mid ka badqaba cudurada binu adamka u cadowga ah ee saboolnimada , dagaalada iyo wax walba oo nolosha binu adamka dib u dhiga.
Hadii ay maanta dagaalo dib uga cusboonaadaan waxa ay noqonaysaa uun in dib u dhac iyo burbur umadeed laga dhaxlo , siyaasada iyo caqliyada ah is muquuninta ee marba qoomiyad ama qolo kursi haysataa inta kale ku taagsato dhaxalkeedu waa dagaalo aan dhamaan oo riiqdoodu dheeraato iyo kala aargoosasho aan soo kordhinayn wax macno ah.
Waxa taariikh iyo dhaxal umadeed ka tagi kara hogaamiyaha dadkiisa uga taga nidaam wanaagsan oo ay ku kala badbaadaan isla markaana noqda mid mustaqbalka dambe dhala horumar iyo jid wanaagsan oo lagu xasuusto.
Waxa aan aaminsanahay in aanu dagaal xal ahayn , sidaasi oo kale aanu gobolkan wax wanaag ah oo uu soo wadaa jirin , ee loo baahan yahay in garashada laga shaqeysiiyo oo aanu qarniga 21naad noqon sidii qarniyadii hore gobolkani ahaa , dagaaladuna waxa ay ka tagaan uun colaado ay ku beeraan da’yarta iyo jiilasha dambe ee umada .
Ethiopia waa dal fac weyn oo guun ah marka loo eego Africa inteeda kale , waa dal ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwani , dhibta iyo dagaalada ka dhaca Ethiopia waa qaar sameynaya guud ahaan Gobolka Geeska Africa una baahan in laga fiirsado .
Dalwalba isaga oo u xor ah gudaha dalkiisa iyo sida uu u arko wanaaga iyo xasiloonida uu leeyahay in ay ku jirto ayaa hadana waxa jirta saameyn uu ku yeelanayo guud ahaan mandaqada uu dalkaasi ku yaallo, taasi oo u baahan in inta aan nabadu faraha ka bixin la raadiyo xal lagaga gudbi karo caqabadaha jira.
Dhibta Ethiopia ka jirta ama Somalia ka jirta ama dal kale oo Gobolka Geeska Africa ah ka
jirtaa kama maqna dalalka kale ee Gobolka, sababta oo ah waxa ay noqonaysaa mid si uun u sameysa , waxaana ka mid ah ;
1- In ay nabadgalyo ahaan u saameyso dalalka kale ee Gobolka oo xaaladaasi oo ay heegan ka galaan dagaalka ku soo kordhay dalka ay jaarka yihiin.
2- In ay dhaqaale ahaan u saameyso oo uu joogsado dhaq-dhaqaaqii nololeed , isu socodkii iyo ganacsiyadii ka dhaxayn jiray laba dal ama sadex dal , dagaalka Tigray iyo Xukuumada Ethiopia ka dhexeeya waxa uu xidhayaa ama khatar ku yahay dhaq-dhaqaaqii isu socod , ganacsi ee dalalka Ethiopia iyo Erateria.
3- In uu saameyn ugu yeesho culeysyo qaxooti iyo dad ka soo barakacay dagaalada oo yimaada dawladaha kale ee Gobolka Geeska Africa si ay nolol, deganaansho iyo xasilooni usoo bidaan.
Qodobadani iyo qaar badan oo kale ayaa ka Iman kara xaaladaha dagaalka dawlada Ethiopia iyo Tigray, marwalbana waxa wanaagsanayd in xal siyaasadeed iyo wadahadal lagu dayo oo aanay colaaduhu sii hurin.
Previous articleCodadka uu Biden ku hogaaminayo Pennsylvania iyo Georgia oo kordhay
Next articleLabada wiil ee Trump dhalay oo ku dhaleeceeyey hogaamiyeyaasha xisbiga Jamhuuriga in aanay si buuxda doorashada ugu taageerin aabahood.
Madaxweyne Sheikh Shariif oo u Duilay Dalka Jabuuti Dhaqaaq Siyaasadeedna
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi la socda ayaa goordhaw ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana horey...
Dowlada Etoobiya oo wadadii bur burka Cagta saartay ...